Ụlọ akwụkwọ Ụtọ
Ụlọ akwụkwọ praịmarị Wentworth na -emegide ụdị ịkpa oke agbụrụ, ịkpọasị na ịkpa oke. Ụlọ akwụkwọ ahụ na -akwado icheiche ma na -akwalite ezi mmekọrịta onwe onye na nke obodo. A ghọtara iche iche dị ka ndị nwere ọrụ dị mma ọ ga -arụ n'ime ụlọ akwụkwọ.
Ndị ọrụ niile na -akwalite ọnọdụ dị mma nke ntụkwasị obi n'etiti ụmụ akwụkwọ sitere na agbụrụ niile. Usoro doro anya dị iji hụ na a na -eme ngwa ngwa ụdị mmegbu niile, gụnyere okpukperechi, ịkpa oke agbụrụ, nwoke na nwoke idina nwoke na nwoke idina nwoke na nwanyị ibe ya, ma kwekọọ n'iwu na ntuziaka ụlọ akwụkwọ.
A na -edekọ ma na -emeso omume ọ bụla nke iji ike eme ihe n'ụzọ kwekọrọ na amụma ụlọ akwụkwọ dị mkpa. Ndị ọrụ niile na-enyocha iwu mgbochi ụlọ akwụkwọ ahụ kwa afọ. A na -azụ ndị ọrụ afọ ofufo ụmụ akwụkwọ ka ha bụrụ ndị na -akwado ndị ọgbọ n'oge ezumike.
Edebere ụkpụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ na Wentworth Deal.